Kodzero-dzevanhu, 30 Chikunguru 2019 page pageno
Madzimai Otaura Kubatwa Chibharo Kwaakaitwa Munguva yeGukurahundi
Sangano reNational Peace and Reconciliation Commission, NPRC, rakanzwa nemusi weChitatu zvinhu zvinotyisa pamwe nekubudisa misodzi zvakaitika kune vamwe vanhu vakabatwa neGukurahundi kuKezi kuMatabeleland South.
ZCTU Inoti Hurumende Ngaibutitse Magwaro eHuori kuNSSA Kwete Kungosunga Amai Mupfumira
Kusungwa kwegurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika Amai Prisca Mupfumira kuri kutambirwa nenzira dzakasiyana siyana munyika.
VaMueller Vanopa Humbowo Kudare reCongress Vachiti VaTrump Vakasiya Basa Vanogona Kusungwa
Gweta rakadomwa kuti riferefete kupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016, VaRobert Mueller, vapa humbowo zvakare kudare rekongiresi muAmerica.
Hurumende Yokurudzira Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri Kunze Kushanyira Nyika
Vagari vemuBulawayo vari kuita maonero akasiyana siyana panyaya yezviri kuitika mukanzuru yeguta reBulawayo, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nehuwori, vamwe vachiti zviri kukonzerwa nerusarura rudzi.
Nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kudhura nekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari kwave kupa kuti mitengo yezvinhu iwedzerwe uko vashandi vasiri kuwedzerwa mari.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vasangana kumahofisi avo eMunhumutapa nenhengo dzerimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers’ Union of Zimbabwe dzinorarama nehurema vachinzwa nezvematambudziko ari kusangana